Shiinaha kartoo Tungsten Carbide Rotary Burrs Soo saaridda iyo Warshad | N&D Carbide
Tungsten carbide burs waa qalab yar oo goynta loo isticmaalo goynta, qodista, shiidi, iyo dhameystirka dusha sare. Waxay ka samaysan yihiin carbide tungsten, taas oo aad u adag oo ku shaqeysa xawaare sare si loo helo geesaha goynta saxda ah. Badanaa waxaa loo isticmaalaa makiinada CNC, daloolinta ilkaha iyo qalabka de-burring.
Tungsten carbide burs ayaa 3 jeer ka adag birta. Sababtoo ah Tungsten Carbide waa qalab adag oo awood u leh inuu ilaaliyo fiiqnaanta, taas oo ka dhigaysa qalab wax ku ool ah oo wax ku ool ah. Carbide bursiga ayaa gooya oo jajabinaya qaabdhismeedka iliga halkii uu ka daadin lahaa sida dheemanka bursarka sameeyo, tani waxay ka dhigeysaa dhammaystir aad u jilicsan. Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa qalabka korontada iyo hawada.
Burburka carbide waxaa si weyn loogu isticmaalaa biraha, sameynta qalabka, injineernimada, injineernimada moodeelka, xardho alwaax, sameynta dahabka, alxamida, kaamerada, xoorida, xoqida, xoqida, dhoofinta madaxa silsiladda iyo farshaxanimada. Oo waxaa loo isticmaalaa aerospace, baabuurta, ilkaha, dhagaxa iyo birta farshaxanka, iyo warshadaha birta birta si loogu magac daro laakiin inyar.
* Goynta godadka
* Shaqada dusha sare
* Ku shaqee dusha sare ee alxanka
Hore: Biinanka Tungsten Carbide
Xiga: Ulaha Tungsten Carbide